Kerala no toerana nofinofisin'ny olona tia natiora. Na dia manolotra fotoana volamena aza ny rano any ambadiky ny kristaly mandany fotoana tsara miaraka amin'ireo olon-tianao, ny fofon'ny zava-manitra amin'ny rivotra dia mamelombelona ny fanahinao. Ny ahi-maitso mavana manodidina azy dia mahaliana amin'ny maso, fa ny tsiron'ny sakafo tsotra an'ny fanjakana kosa dia mijanona ao amin'ny tsiroo mandrakizay. Thekaddy dia toerana fizahan-tany malaza any Kerala noho ny zavamaniry sy ny biby ary ny toetrany mahafinaritra.
1. Fiarovana masina Periyar Wildlife
Raha te hijery akaiky ny tigra ianao, ny toerana tokana an'ny tigra ao India, ny Periyar Wildlife Sanctuary dia tokony hitsidika anao mandritra ny Fitsidihana India atsimo. Any amin'ny haavon'ny 700 metatra, io ala io no toeram-ponenana azo antoka ho an'ny tigra, elefanta, lambo dia, sera sambar, leoparda, rajako, rajako ary bison. Ny ampahany tsara indrindra amin'ity ala ity dia ny fahafahanao mankafy safari-drano mba hijerena ireo tany masiaka.
2. Farihy Periyar
Tena mamelombelona tokoa ny mitaingina ny rano fitaratra ao amin'ny Farihy Periyar eo afovoan'ny ala tropikaly; ireo tsara vintana koa dia afaka mahita andiam-elefanta mandro sy milalao amin'ny ranon'ny farihy.
Mifohaza amin'ny fofon'ny cardamom ao amin'ny tanànan'ny fahagagana ao Kumily. Mandehana mamakivaky ny karipetra maitso amin'ny zaridaina dite na misotro kafe kafe mafana miaraka amin'ny mponina mba hahatsapa ny tena votoatin'ny fiainana amin'ny tontolo voajanahary.
Ity toerana fitsangantsanganana ao Kerala ity dia eo amin'ny 5 km miala an'i Thekaddy. Raiso am-pialan-tsasatra amin'ny natiora mando amin'ny lohasaha ny natiora, mipaka eo anelanelan'ny tendrombohitra manjavozavo, na mahazo tifitra maimbo any amin'ireo toeram-pambolena zava-manitra ao amin'ilay toerana. Ny mpizahatany dia afaka mankafy mitaingina elefanta eto hamakivaky ireo voly.
Kitiho ny kitaponao ary mankanesa any Pandikuzhi hankafizanao fotoana mahafinaritra miaraka amin'ireo olon-tianao. Mandehandeha mamaky ireo havoana hamaha ny zava-miafina natiora na mipetraka fotsiny ary mankafy ny feon'ireo renirano eo akaiky eo.
Ivom-pivarotan-karama lehibe, ity toerana ity dia manome anao fanazavana mazava momba ny fambolena zava-manitra. Azonao atao koa ny mividy fonosana vitsivitsy eto.
7. Tempolin'i Mangala Devi
Misitrika lalina amin'ny taloha kolontsaina sy fomban-drazana Kerala amin'ny toerana masin'i Thekaddy 2000 taona, ny Tempolin'i Mangala Devi, natokana ho an'i Devi Kannagi. Ity tempoly ity dia mampiseho ny fomba fanaovana maritrano Pandiana. Misokatra indray mandeha isan-taona ity tempoly ity, mandritra ny festival Chitrapournami ary mila alalana manokana avy amin'ny manampahefana ianao hitsidihana.
8. Ivon-toerana Kadatanadan Kalari
Hafa mihitsy ity toerana ity amin'ny faritra hafa ao Thekaddy satria afaka mianatra arts martiaux eto ianao. Ianaro ny kanto miaro tena amin'ireo tompona kilasy manerantany ao Kalari; amin'ny maha-mpitsidika anao dia afaka mankafy ny fampisehoana amin'ny galeriana natao manokana ianao.
Raha mitady fampiononana fotsiny ianao dia mangina ity fitsangatsanganana gara dia ho anao. Na dia manome anao traikefa tsy fahita firy aza ny voninkazo mamirapiratra sy ny bibidia tsy fahita any amin'ny toerana, dia mamafa ny fahasahiranan-tsainao rehetra ny fahasambarana voajanahary amin'ny manodidina. Ny maha ara-panahy ny toerana dia mahatonga azy io ho fivahinianana masina ihany koa; mendrika hitsidika ny tempolin'i Sabarimala sy ny fankalazana Makarajyothi.
Ny natiora dia toa ao anatin'ny toe-po mahafaly ao amin'ity tanàna fandriam-pahalemana ity, miaraka amin'ireo hazo voanio, renirano kely, renirano mandihy ary lohasaha maitso maitso.
Noho izany dia tsy misy fisalasalana fa ny fitsangatsanganana any Thekaddy dia mitondra anao any amin'ny fonenan'ny hatsarana sy fiadanam-po lehibe.